Imwe gasi detector Fekitori - China Imwe gasi detector Vagadziri, Vatengesi
inotakurika SO2 sarufa dioxide Detector CELH50
Model Nhamba: CELH50 Unyanzvi: Coal Mine Kuchengetedza Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Chekuongorora Certification Zvikumbiro: Imwe chete SO2 detector chishandiso chakachengeteka mukati uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzora SO2. Yega SO2 detector ndeye yakachipa-kudhura, yekuchengetedza-isina imwechete gasi yekutarisa yakagadzirirwa kuchengetedza vashandi kubva kune inotyisa SO2 gasi kuratidzwa mune yakanyanya kunyanyisa mamiriro. Kunyangwe iri diki kukura kwayo, imwe chete SO2 detector inosanganisira maficha anowanzo kuwanikwa chete i ...
Model Nhamba: CYH25 Unyanzvi: Coal Mine Kuchengetedza Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Chekuongorora Certification Zvikumbiro: Inotakurika O2 detector chishandiso chakachengeteka uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzora O2. Inotakurika O2 detector ndeye yakachipa-kudhura, yekuchengetedza-yemahara imwe gasi yekutarisa yakagadzirirwa kuchengetedza vashandi kubva kune ngozi O2 gasi kuratidzwa mumamiriro akaipisisa. Kunyangwe iri diki kukura kwayo, iyo inotakurika O2 detector inosanganisira maficha anowanzo kuwanikwa chete mu l ...
Amoniya Gasi NH3 Monitor JAH100
Model: JAH100 Kukodzera: Marasha Ekuchengeteka Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Kuongorora Chitupa. Kana uchiona kuti kusangana kweammonia mune zvakatipoteredza kunosvika kana kudarika kukosha kwakatemwa kwearamu, iyo ammonia detector inotumira kurira, mwenje uye vibration maaramu masaini. Inoshandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana dzecol ...
Unyanzvi: Marasha Ekuchengeteka Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Yekuongorora Certification Muenzaniso: JHB4 Zvishandiso: Infrared Inopisa Gesi Detector chishandiso chakachengeteka uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzora Inopisa Gasi yevasungwa mumhepo inogara ichienderera uye nekukurumidza. Inotora NDIR infrared tekinoroji nekukwirira kwakaringana uye nekukurumidza kupindura. Iyo yekuyera huwandu hweCombustible (CH4) gasi iri 0-5.0% kana 0-100% vol. Kunyangwe iri compact saizi, iyo infrared Co ...
inotakurika H2 hydrogen Detector CQH100
Model Nhamba: CQH100 Kukodzera: Marasha Ekuchengetedzwa Chitupa Chitupa Kuputika-Chitupa Chekuongorora Certification Zvikumbiro: Inotakurika H2 Detector chishandiso chakachengeteka mukati uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzora H2. Inotakurika H2 Detector ndeye yakachipa-isingadhuri, isinga gadzirise isina gasi yekutarisisa yakagadzirirwa kuchengetedza vashandi kubva kune ngozi H2 kusvibiswa kwe gasi mumamiriro akaipisisa. Kunyangwe iri diki kukura kwayo, imwe chete H2 detector inosanganisira maficha anowanzo kuwanikwa mu ...
Muenzaniso: GLH100 Kushanda: GLH100 H2S Meter inogona kuenderera uye nekushandura pasi gomba H2S yevasungwa kuita chiratidzo chemagetsi wozoendesa kune anowirirana machira. Inogona kuratidza kuwanda kwemethane mu situ uye ine basa rekushandura rinonzwika uye rinoonekwa alarm. Inogona kubatanidza pamwe zvichiongororwa hurongwa, mudariki uye mhepo simba gasi zvechizarira zviridzwa. Inoshandiswa zvakanyanya mumunda wemugodhi wemarasha unoshanda kumeso, magetsi uye mega bako uye kudzoka ...
Inotakurika infrared CO2 gasi detector CRG5H
Unyanzvi: Marasha Ekuchengetedzwa Chitupa Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Chekuongorora Certification Zvikumbiro: Infrared CO2 detector chishandiso chakachengeteka uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzora CO2 kusangana mukati memhepo ine mhepo inoenderera nekukurumidza uye nekukurumidza. Inotora NDIR infrared tekinoroji nekukwirira kwakaringana uye nekukurumidza kupindura. Iyo yekuyera huwandu hweEC2 gasi iri 0-5.0%. Kunyangwe iri diki kukura kwayo, iyo infrared CO2 detector inosanganisira maficha anowanzo kuwanikwa chete mune yakakura yakawanda ...
Inotakurika CO kabhoni monoxide Detector
Model Nhamba: CTH1000 CTH2000 CTH5000 CTH10000 Unyanzvi: Coal Mine Chengetedzo Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Kuongorora Certification Zvikumbiro: Inotakurika CO detector chishandiso chakachengeteka uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzora CO. Inotakurika CO detector ndeye yakachipa-mutengo, kugadzirisa -mahara imwe gasi yekutarisisa yakagadzirirwa kuchengetedza vashandi kubva kune inotyisa CO gasi kuratidzwa mumamiriro akaipisisa. Kunyangwe iri compact saizi, inotakurika CO detector inosanganisira featu ...
CL2 Chlorine Gesi Gasi Monitor JLH100
Unyanzvi: Marasha Ekuchengetedzwa Chitupa Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Yekuongorora Certification Model: JLH100 Nhanganyaya Iyo inoshanda musimboti weklorini gasi detector: Iyo nzira yekushanda yeiyo electrochemical musimboti sensor ndeyekutarisa imwe yakati gasi kupararira. Ipa yakanakisa gasi pachako kuona, kuita kwakavimbika, nyore kushandisa, yakasimba uye yakasimba. Iyo yakasimba yeinjiniya yepurasitiki ganda inogona kumira kudonha uye kubonderana kunogona kuitika panzvimbo. iyo hombe-skrini ...